XOG: Magacyada Musharaxiinta Madaxweynimo Ee Soomaaliya 2016 – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee 2016, waxaa naga xiga waqti yar , hase yeeshee waxaa soo baxaya warar horudhac ah oo ku saabsan shaqsiyaadka laga yaabo inay is-sharxaan.
Diblumaasi lagu magacaabo Axmed Guuleed, oo Muqdisho ku sugan ayaa mareeg u sheegay in hadal heynta Musharaxiinta u tartameysa qabashada madaxtinimada dalka ee dhaceysa 2016-ka laga dhex dareemayo masraxyada siyaasadda.
Diblumaasiga ayaa sidoo kale inoo xaqiijiyay inay jiraan Mas’uuliyiin ay cadahay inay is-sharxayaan iyo kuwa loo maleynayo, balse aan weli la xaqiiji Karin.
XUBANAHA IS-SHARXAYA 2016 WAXAA KA MID AH:-
Cabdinuur Axmed Darmaan
Cabdi-Qaasim Salaad Xassan
Xasan Maxamed Xuseen ”Mungaab”
Maxamuud Nuur Tarsan
Maxamed Cabdilaai Farmaajo
Cabdi Weli Sheekh Axmed
Sidoo kale, waxaa jiro Musharaxiin kale oo aan weli caddeyn mowqifkooda, waase ay caddahay in musharaxiinta ay intaas ka badan doonaan, waxeyna Shabakada mareeg idiin soo bandhigi doontaa dhawaan magacyada Musharaxiintaasi.
Tagged Musharaxiinta Madaxweynimo Ee Soomaaliya 2016